၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များမှ အသေးစိတ် ဆန်းစစ်လေ့လာ သည့် သုတေသနစာတမ်းများအား ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် လွှင့်တင်ထား
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း အစီရင် ခံစာများကို အတွဲလိုက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာ ပထမအဆင့် အနေဖြင့် ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းကို ၂၀၁၄ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် လည်းကောင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်း ပင်မအစီရင်ခံစာများ ကို ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မေလတွင်လည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လတွင်လည်းကောင်း၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့ပြင်၂၀၁၄ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အသေးစိတ် ဆန်းစစ်လေ့လာသည့် သုတေသနစာတမ်း ၁၃ စောင်နှင့် သန်းခေါင်စာရင်းရလဒ်မြေပုံများကို ဆက်လက်ပြုစုလျက် ရှိပြီး မွေးဖွားခြင်းနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊ သားဖွားမိခင်သေဆုံးခြင်း စသည့် အသေး စိတ်သုတေသန စာတမ်း သုံးစောင်ကို၂၀၁၆ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ထပ်မံရေးသားပြုစုပြီးဖြစ်သော လူဦးရေ ပြောင်းလဲခြင်း အသေးစိတ်သုတေသနစာတမ်း ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းသွား လာခြင်းနှင့် မြို့ ပြထွန်းကားလာခြင်း အသေးစိတ်သုတေသန စာတမ်းကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လည်း ကောင်း ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် www. dop.gov.mm တွင် လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
လူဦးရေပြောင်းလဲခြင်းစာတမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏လူဦး ရေပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များ၊ အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်၏ သက်ရောက်မှုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူဦးရေ ဆုလဒ်ကို ရရှိခံစားနိုင်စေမည့် နည်းလမ်းများကို အသေးစိတ် ဆန်းစစ်လေ့လာရေးသားပြုစုထားပြီး ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ ခြင်းနှင့် မြို့ ပြထွန်းကားလာခြင်းစာတမ်းတွင် ပြည်တွင်းရွှေ့ ပြောင်းသွားလာခြင်း၊ ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း၊ မြို့ ပြ နှင့်ကျေးလက်ဒေသတွင် လူဦးရေပျံ့နှံ့နေထိုင်မှု (မြို့ ပြထွန်းကား လာခြင်း)ဟူ၍ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သုံးမျိုးကို အသေးစိတ် ဆန်းစစ်လေ့လာ ရေးသားပြုစုထားကြောင်းနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက် www. dop.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။